Moto 360 Review | Akụkọ akụrụngwa
Villamandos | | Ngwa, smartwatch
Izu gara aga anyị nwere ohere ịnwale ọgba tum tum 360 nke Motorola, ikekwe ihe kacha chọrọ smartwatch na ahịa na nke nwere ezigbo ngosi. Tupu anyị amalite nyocha a, m na-agwakwa gị echiche m banyere akwa a, echere m na ọ dị mma na m gwara gị na n'ozuzu ya ọ bụ smartwatch nke masịrị m nke ukwuu n'ihe gbasara imepụta, mana na o mechuru m ihu otutu na ọkwa nke ngwanrọ. Batrị bụ ihe anyị ga-edebe maka oge ahụ, n'ihi na ọ ga-enwe ohere nke ya n'ime edemede a.
Ihe a haziri nke a Moto 360 dị ka m kwuru bụ ikpọ ma n'ezie ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ahịa. Na mgbakwunye, elekere Motorola a bụ otu n'ime ndị mbụ hapụrụ atụmatụ aghụghọ nke ụdị ngwaọrụ ndị a nwere. Tụnyere m Samsung Gear Neo 2 anyị nwere ike ikwu na ọ dị ka eluigwe na ụwa.
Na a ọla ọkpụkpọ nwere nnukwu ngosipụta, jikọtara ya na eriri ejiri akpụkpọ anụ mee na nke ahụ nwere ike ịbụ oji ma ọ bụ isi awọ na-enye anyị nnukwu mmetụta nke iyi elekere anya na nkwojiaka.
Ọ dị ezigbo egwu na anya mbụ na ihuenyo bụ kpamkpam gburugburu na bụ na ala ọ ga-egosi ebipụ Nke a bụ ebe ihe mmetụta ọkụ dị, dị mkpa maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke elekere ahụ.
na isi atụmatụ na nkọwa nke Moto 360 a Ha bụ ndị a:
Ihe ogugu: 4,6 x 4,6 x 1,1 cm
Arọ: gram 50
Ngosipụta: gụnyere ihuenyo 1,56 nke anụ ọhịa na mkpebi nke 320 x 290 pikselụ
Ncheta RAM: 512 mb
Batrị: 320 mAh, ọ bụ ezie na eziokwu egosila na ọ bụ naanị 300 mAh
Banyere ngwanrọ, a Moto 360 awụnyere n'ime Androir eyi, na ya mbipute 2.0, nke nwere interface dị mma, ma nke ị ga-eji mee ihe iji mee ya ngwa ngwa na ngwa ngwa.
1 Batrị, isi ojii nke a Moto 360
2 Ọ bara uru itinye euro 249 na Moto 360?
3 Mkpebi kpamkpam
Batrị, isi ojii nke a Moto 360
Batrị bụ n'ezie isi ebe ngwaọrụ niile nke ụdị a na ahịa kwesịrị imeziwanye, na na ihe atụ na Motorola smartwatch anaghị enye gị ohere iji ya ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ejikọtaghị ya na smartphone, batrị ahụ nwere ike ịdị ntakịrị karịa otu ụbọchị.
Ọ bụrụ na e nwere ụdị nke abụọ nke Moto 360, ọ ga-adị mkpa maka batrị ahụ ka ọ dịkwuo mma nke ukwuu, ka o wee bụrụ ngwaọrụ bara uru na nke bara uru maka mmadụ niile. Ma ọ bụ na ịnweta ụgwọ nke ụdị nke a kwa ụbọchị, ma ọ dịkarịa ala maka m na n'ezie maka ọtụtụ ndị bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na nke ọ na-adịghị njikere ịgafe.
Otu ihe pụtara ìhè na ngwaọrụ a bụ na iji kwụọ ụgwọ ya, o nwere "ọdụ ụgbọ mmiri" nke na-enye ohere ikuku ikuku nke ngwaọrụ ma na-eme ka oge ịgba ụgwọ dịtụ mma.
Ọ bara uru itinye euro 249 na Moto 360?
N'uche m na ịbụ nwa okorobịa na-enweghị mmasị na nche, ma ọ bụ na-eyiri ya na nkwojiaka ya, echeghị m, mana ka m kọwaa.
Echere m na Moto 360 adịghị enye gị ihe ọhụụ ma ọ bụ nke ị na-enweghị ike ịnwe na ngwaọrụ mkpanaka gị, nke ị ga-esoro gị mgbe niile ka nche wee na-arụ ọrụ zuru oke.
Ọ bụ ngwa mara mma nke na-adị mma na nkwojiaka, mana m na-eche na euro 249 bụ ọtụtụ euro, yana ịzụta ya ga-abụ whim karịa mkpa ma ọ bụ ihe nwere ike inye anyị ihe na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, nsogbu nke ndụ batrị dị oke ala, nke na-amanye gị ka ị na-akwụ ụgwọ ihe ọ bụla kwa ụbọchị, ga-abụ ihe ọzọ dị mkpa nke ga - eduga m ịmachi euro ole na ole na Motorla smartwatch.
Ekwesịrị m ikwupụta na mgbe m nwesịrị ma nwalee smartwatches ndị ọzọ n'ahịa, m gbara ọkụ na ọchịchọ inwe ike ịnwale Moto 360 a, iji chọpụta ma m ga-azụ ya. Mgbe izu ole na ole jiri m kpebiri na maka oge m agaghị azụta ụdị akwa ọ bụla, ma agaghị m eme ya ruo mgbe batrị dị ogologo oge ebe ọ bụ na ekwuru m tupu m achọghị ịgba ya niile ụbọchị.
Ee, n’enweghị obi abụọ nke a Moto 360 bụ smartwatch kachasị mma enwere m ike ịnwale na nke nwere njiri mara mma. Dị ka ụfọdụ ezigbo ndị enyi m kwuru ụbọchị ole na ole gara aga, Moto 360 a nwere otu anya ma ya mere eze n'ala ndị ìsì.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Anyị nwalere ma nyochaa Motorola Moto 360
Ihe batrị dị ezigbo nso. Ọ na-adịkarị ụbọchị abụọ n’enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na m kụrụ ya ihe, ee, otu ụbọchị, mana na-etinyeghị uche ya.
Ka anyị hụ, ihuenyo nwere ihe mmetụta gburugburu na ọkụ, ihe LG smartwatch ji obi ọjọọ ada! M na-ekele Motorola maka inwe nke a n'ihi na m na-etinye ọtụtụ awa na nzukọ na ụlọ ahịa na anwụ na nzukọ na nzukọ.
Zaghachi Miguel Alejandro Gargallo Llamas